Saamaynta Fıkradaha Dadka Kale, Waligaa Ha Isdhiibin! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Muslimo Cabdullaahi — January 31, 2020
Waxaan rabaa ın aan halkaan ıdınkula wadaago qıso yar oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelato qof fıkradaha dadka kale. Waxaan imid dal fok oo anan cidna ka garanaynin anigoo dan wayn lahaa, oo aan oga soo tagay xiligaas daar yaroo qurxoon mar dhow aan dhistay.
Dantaa laaha waxay ahayd mid fog, oo xitaa dareen kastoo aan dareemayey aan dhagi jalaq usiin si aan guul u gaaro.
Run ahaanti geesi ayaa jiro i garab taaknaa, rabay in aan guul gaaro gacaltooyo oo uu i qawo darteeda. Awaalkiisa waligay ma ilaabi doono sida wacan oo uu ii dheeri galiyey. Runta wuxuu i dareensiyey in aysan guushaas ahayn guushayda oo kaliya oo ay asna guushiisa tahay. Taasi oo ii sii sababtay in aan aad usii jeclaado gushayda.
Waayo guushaaas waxay noqotay magaceed guul in ay garaan labo qof ay u bahanyihiin. Marka aan imid dalkii waxaa si farxad iyo kala gacayl leh ii soo dhaweyey asxaabtayda aan aad u jeclahay ayagana i jecel. Laakiin nolasha qurbaha waa nolal adag si kastoo laguu soo dhaweeyo waa nolal kaligaa ku sugayso oo aadan helaynin cid ku garab siiso goor walbo. Sababtoo ah cid walbo arinkeedaa ayaa qoorta u suran, oo cid taak ku heshaa ma jirto. Sheekada waa kartidaad ku tasho kali ahaanteeda meesha.
Markaan soo baxaayey waxyaabihii i sawirnaa wax ka duwan ayaan dareemay. Run ahaantii waxaa dareemay cidlo fara badan hilow aan u hiloobay dalkaygay iyo dadkayga aan jeclaa. Xittaa manan aminsaneen in aan dareemaayo hilow intaas la eg markaan soo baxayey. Waa sax waan jeclaa dalkayga iyo dadkayga oo daruuf ayaa iga soo waday lakiin aniga ahaantay in aan dareemaayo xiiso intaas la’eg maan moodaynin, lakiin si kasto ay ahaato waa in aan garaa hadafkaan lahaa.
İntaas marka laga soo gudbo waxaa dhacay waxyaabo aad u badan oo ubaahnaa sabar iyo ad adeeg waayo ma sahlano in aad deegaan ku samaysato dal aadan dadkiisa iyo luuqadiisaba aadan garanaynin. Luuqada waxay igu noqotay caqawad aad u wayn, sababtoo ah waa dad intiisa badan anan garanay luuqado kale oo luuqadood bes ayey ku hadlaan. İn aan kula hadlo luuqadooda ayaan ku qasbanaa si kastoo ay ahooto waan dadaalay, oo sabar badan ayaan muujiyey si aan u xaliyo arinkaas inta aan ku jiro deegaan samaysankayga.
Waayo meel markaad ku cusub tahay waxaa jira shuruudo badan oo laga rabo in aad buuxi si aad halkaas ugu noolaato. Lakiin wax walbo waan u dhawar adeegay in kastoo aysan sahlaneen lakiin wax walbo hadafkaygaa igala waynaa.
Muda ka dib shaqsi ayaan bartay aad ayaan ugu farxay qofkaas barashadiisa waayo isku dal ayaan nahay waxaan is dhahay waa qof dalkaan kaaga soo horeyey kaa khirad badan wax badan kugu saaci doono. Nasiib daro qofkii wuxuu igu beeray naceeb ku saabsan dalka dadkiisa,luuqadiisa iyo cuntooyinkiisa. Waa dadkii aan dalkooda u umid in aan cilmiga ka bartay. aniga waxaa noqday mid qadatay talooyinki oo idil waayo waa qof kaa khibrad badan ayaan lahaa.
Laakiin waxaa lagamammaarman ah in aan dadkaan la dhaqmo barto luqadood si aan ubarto cilmigii aan ogo soo tagay dalkayga iyo dadkaan jeclaa.
Waxaan dareemaa walwal fara badan iyo naceeb ku aadan dadkaan wayo fikirkii laysiyey ayaan qaatay. Taasi waxay i sababtay in aan noco dadkii oo aan inta badan ku fikiro in aan u laabto dalkayga. Runti waxaa dareemayey naceeb dadkaas iyo cuntooyinkooda ku aadan xitaa onoon siin naftayda fursad aan ku barto ayaga ane ay igu bartaan ayaan uqaday naceeb dadkii anoo qaatay qofkaas taladiisa. Waxaan dareemay walwal badan oo sababtay in aan jismiyan aad u daciifo, waxaaba isii dheer intaas aan ahay qof xitaa aysan is fahmin dadkii kale oo ajaanibta ahaa oo aan meesha ku bartay. Taasi waxaaba kasii daran xitaa isma fahan dadkaan jeclaa oo aan kasoo tagay oo inta badan kula xiriiro baraha bulshada. Naceebkii aan u qaaday dadkaas cuntooyinkooda anigoon tijaabin ayaan mid kasto qalbigay galiyey in uusan si fiican u soo dhadhamaynin. Adaan u daciifay taasi oo ii sii sababtay in aan xanuunsado. Waa sax cuntadooda tii dalkayga aad ayey ogo duwantahay, lakiin waa aniga qaladka oo xitaa anigoon tijaawin galiyey maskaxday in ay xuntahay anoo ka tixracaayo wixii la ii sheegay. İnta badan dadkii i jeclaa oo aan kasoo tagay ayaan u diri jiray calaacal oo ayagoo xitaa wan murigo galiyey.
Ayagoo aan aniga boos faaraqo ah kasoo tagiyey oo aan u buuxin jiray ayaan hadana murugo ugu sii daray. Xaalkaa aduu usii xumaaday oo gawadhii hadafka laheed oo hadafkaas dartiisa waxyaabo badan u soo burburisay in ay laawato ayey doonaysaa ayadoon guulaysan.
Waan is dhiibay oo waxaan iska dhaadhiciyey dadkaan lamo nolaan kartida, cutadaan ma cuni kartid cimiladaan mala qabsan kartid. Anigoo ay isii dheertahay xiiso aan u xiisay qofaan aad u jeclaa. Aad ayaan u wareeray xaalkaygana wu qasmay waxaa jogaa meel aan ka laawan karin kuna nolaan karin. Waayo in ku laabto dalkayga anoon guulaysan waaa murugo tan kasii wayn. Xitaaa waxaa maskaxdayda shaqsigaas iga galiyey luuqadaan ma baran kartid. Ane in aan barto luuqad muhiim ayey ii ahayd si aan u barto cilmigaan u i maaday.
Maxaan bartaa luuqada waa anigaas inta badan xanuunsan ka dibna markaan wax cuni wayey, dadkana aan la hadlin oo in ay xun yihiin aminsan markii dambo waxaa niyada iiga soo dhacday iska bax waayo wax mabarankartid oo luuqadi ayaad baran la da ahya.
İnkasta oo aan waqti aad u yar joogo wadanka, oo aan luuqada la gaarin waqti aan dhihi karo ma baran karo, ayaan niyada galiyey way adagtahay ma baran kartid. Nasiib wanaag waxaan helay dad nolashayda aad u jecel oo i garab istagay haba ugu badnadaan dadkaas saxibadayda iyo ninkayga aadka ii jecel. Walibo asxaab kale oo wanaagsan ayaa igarab istagay, waayo arinka aniga wuu iga farbatay waxaan u baahday sacidaad wayn.
Dadkaas aan awaal kooda ilaabi doonin waxay igu dheero galiyeey in aan joogo halkaan oo aan gaaro dantii aan lahaa. Walibo kasaaro maskaxdayda waxa ku jiro oo ah meshaan ma joogi kari oo aan barto cuntooyinka halkaan laga cuno oo aan yeesho saxibo cusub oo dadka dalka iska leh ah. Hadaladii lama ilawaanka ahaa ay i dhaheen dadkaas waxaa ka mid ahaa.”qofka aad jeceshahay asna ku jecel wuxuu aad ugu farxaa in uu arko adoo guleestay.
Ha ilaabin in aysan gushaan ahayn gushaada oo kaliyey oo qof kale oo ku jecel ay kaagala dhaxayso gushaan” qof kale wuxuu igu yiray “haddii aad guul daraysato waxaa xitaa aad ku nici doono qofkaad aduunka ugu jecleed. Waayo qof aan naftiisa hormar gaarsiin karin naf kale wax uma qawan karo” qofka sedexaad ayaa i siiyey talo ah in aan niyada kasaaro fikradaha qaldan ay i siyeen dadkii fikirka qaldanaa lahaa.
Ugu dambayn waan fikiray waxaan dhahay dadkaan kula taliyey talooyinkooda qaado,oo tijaabo nolasha halkaan, waxaan siyey nolashayda fursad anigoo isticmalaayo fikradihii wanaagsanaa (positive). Waxaa dhacday in aan guulaysto oo aan ku gulaystay laqabsiga meesha oo aan bilaabay in yeesho saxibo, sidoo kalena barto cunooyinka halkaan laga cuno. Waa sax cuntooyinka dalkayga iyo kuwa halkaan waa kuwa kala duwan.
Laakiin anaa leh qaladka oo aan baran, haddii aan cunto cuno waxay i sahlaysa in aan iska difaaco cimilad qawowga oo halkaan ka jirta iyo cudurado. Lakiin anaa qaldanaa oo qaatay fikiro xun oo xitaa anan siin fursad naftay ay wax yaabo badan ku barto.
Saamaynta ay leedahay fikirada dadka ila arak aniga maheen qof la bedali karo oo hadafkeeda anan gaari garin. Balse qaladkayga waxa weeye waxaan qaatay fikiro aan wanaagsaneen.
Laakiin waxaa dhacday in ay marki dambo fikiro wanaagsan i bad baadiyeen. Waxaa meesha ka cad in dadka kaa okdhow ay samayn wayn kugu yeshaan. Qofka khibrad ka qado aan islahaa lakiin waxaan qatay fikiro aan wanaagsaneen oo dhibaato wayn i geestay. Waa in aan ka taxadarnaa dadka naga akdhow fikradahooda iyo dadka aan khibrada ka qadanayno.
Taladii kowaad oo lay siiyey iyo taladii lawaad, hada waa labbo kale duwan. dadna talo wanaagsan ayey i siiyey oo in aan wax laqabsadaa oo aan wax walbo barto oo aan go’aan ka qadan waxyabaha anoon baran. Waxaan maqli jiray maahmaahdii soomaaliyeed oo oran jirtay “barashada horteeda ha i nicin” anne anoon wax walbo baran ayaan nacay. Waxaan kaloo soo xusuustay ereyadii inglishka ahaa ( be poaitive). Hada waxaan hayaa aniga wadadii guusha lakin in aan idinla wadaago samaynt ay ku yeelan karto fikirkaada si kastoo oo u wanaagsan yahay fikrada kale ayaan idinla wadaagay.
Tags: Saamaynta Fıkradaha Dadka Kale
Next post Hab Fikirka Toolmoon
Previous post Preaching vs Practice: Can Hassan Dahir Aweys be the right person to give a fatwa?